Luyimpilo ucansi lwasekuseni - Ilanga News
Home Umbele Luyimpilo ucansi lwasekuseni
Udokotela uthi lwehlisa ingcindezi, lwenze usuku lube mnandi
UDOKOTELA ogogode ukwelapha izigulo zabesilisa ugqugquzela ukuba abasebudlelwaneni bezothando bangawuvilapheli umgijimiswano wasekuseni.
IMIHLOMULO yeze-mpilo etholakala ngokuzitika kwezithandani ngenkonzo yasekamelweni ekuseni, yikhona kanye okwenza ukuba udokotela ogogode ukwelapha izigulo zabesilisa agqugquzele ukuba abasebudlelwaneni bezothando bangawuvilapheli lo mgijimiswano wasekuseni. UDkt Thabile Zwane weThe Blue Clinic eseduze kwaseCity Hospital, eThekwini, uthi kasikho nesincane isidingo sokuthi izithandani zishalazele inkonzo yasekamelweni yasekuseni, uma kubukwa ubuhle bayo empilweni. Phela abanye uma kukhulunywa ngenkonzo babika imbiba nebuzi, ungaze uzitshele ukuthi kusuke kuyombiwa amatshe ekamelweni. Uthi akuqaphelayo wukuthi le nkonzo iyancipha kwabasuke sebeshadile, okuyinto ayigxekayo njengoba kuyiyona eqinisa kakhulu uthando.
Lunikana umdlandla otholakala kwicoffee lasekuseni
“Abesifazane bayaye bakhale ngokuthi bayakhathala ngenxa yezingane nemisebenzi eminingi yasendlini. Bathi amadoda kawabasizi ngalutho, ahlalela amaphephandaba noma azibukele umabonakude lize liyoshona ilanga. “Lokhu kakukuhle ngoba kwenza ukuthi uma sekufika isikhathi sokuyolala, ingabe isenziwa inkonzo yasekamelweni, ngoba umama uzobe esefuna isikhathi sokuphumula,” kusho uDkt Zwane. Uncoma ukuthi izithandani zizijwayeze inkonzo yasekuseni. Uthi ngendlela enikezana ngayo umdlandla, ingena khaxa esikhaleni sekhofi lasekuseni.
“Inkonzo yasekamelweni yasekuseni yenza usuku lube mnandi. Phela inikana umdlandla kubo bobubili ubulili, ungabi nengcindezi. Ngaphezu kwalokho, idala ukuthi nibe nokusondelana okuthe xaxa nesithandwa sakho, nixhumane kangcono,” echaza. Makucushwe ialarm ukuze ingagejwa i-morning glory Abanye lo mgijimiswano wasekuseni bayaye bawubize nge morning glory, kanti uDkt Zwane uyaye akhuthaze ukuthi izithandani zicuphe i-alarm, ukugwema ukuba wenziwe sekutatazelwa. “Isibonelo, uma kuwukuthi nivuka nilungiselele abantwana ekuseni, kumele nivuke ngaphambi kwesikhathi enisijwayele.
“Mhlawumbe uma nibavukela ngehora lesihlanu (05h00), kuzomele nivuke ngesikhathi esinganeno kwaleso ukuze nithole kahle isikhathi esanele sokuzithokozisa. Lokhu ningakwenza kube yingxenye yezinto enizenzayo uma nivuka ekuseni,” esho. Uthi wonke umuntu usuke elale isikhathi esenele ngayizolo, yingakho inkonzo yasekuseni iba ngcono kuneyasebusuku. “Uma ufika kuvuthondaba umzimba ukhipha osawotshana abenza izinto ezithile emzimbeni, yingakho eba nokujabula owesilisa,” esho. Ubala ama hormone aphuma ngalesi sikhathi okuyi-dopamine ekusiza ekutheni ube nomdlandla, yi-oxytocin ekwenza ukhululeke, ungacikeki kalula, ube nomuzwa wothando, i-testosterone eyenza ukhuthale enkonzweni futhi ujabule ne-endorphin, eyehlisa ingcindezi.
Luchachambisa isikhumba sowesifazane, siqhakaze
“Isikhumba siyaqhakaza, sichachambe kwabesifazane ngenxa yokuthi kusuke kuphuma i-hormone ebizwa nge-oestregen eyenza isikhumba sibe sihle. Yingakho kuyaye kuthi uma owesifazane obekade ezijabulisa kuthiwe une-glow,” kuqhuba uDkt Zwane. Uthi noma ufuna ukwehlisa isisindo iyasiza ngoba ifana no-kuthi uyazivocavoca, ikakhulukazi uma uzoyenza ekuseni ungakadli lutho.
“Isiza ekutheni ukudla kugayeke kahle, iphinde ikuvikele futhi ilawule ushukela, iqinise namasosha omzimba. Ibuye ikusize na-sekuxhumaneni kangcono nopha-thina wakho. Amathuba okuthi induku ivuke kalula ekuseni maningi ngoba i-testosterone isuke isezingeni eliphezulu ngalesi si-khathi sosuku. Umzuliswano owodwa nje wenza omkhulu umehluko,” esho.
Owesifazane udinga ukuthintwa ngendlela efanele
Nokho uthi uyazi ukuthi abanye bayaye bakhale ngokuthi kabagezile noma kabaxubhile ngezikhathi zasekuseni. UDkt Zwane uthi izindawo okubalwa kuzo umqala, isisu, amahlombe nezinye izingxenye zomzimba ziqabuleka njengasemlonyeni nazo. “Abesilisa bahlezi besemuzweni wokuzijabulisa ngenxa yokuthi i-testosterone isuke iphezulu. Kanti kowesifazane uma umqhamukele kahle ngemuva kuba lula ngoba usuke ezosizwa isitho sowesilisa ukuthi sesilungele umzuliswano. Ngaphandle kwalokho, uma umthinta kahle ngendlela efanele futhi umnika isikhathi esanele, mancane amathuba okuthi akwenqabele uphathina wakho,” esho.
Kuyanikelwa ngesikhathi emsebenzini, makunikelwe nangesokwakha umndeni Uthi njengoba abantu bekwazi ukuthi banikele ngesikhathi sabo emsebenzini, kanjalo nasekwakheni imindeni yabo bangakwazi ukuzinikela. Uthi kuyasiza ukuthatha isikhathi sasekuseni usiphe uphathina wakho, ngaphambi kokuqala kwengcindezi yosuku. Uthi ngisho uphathina wakho engena esitolo ngokuhamba kosuku, kawuphumi emqondweni wakhe, okwenza akuphathele kalula okokukujabulisa. Uncoma ukuba inkonzo yase-kamelweni yenziwe okungenani kabili ngesonto, uma uthandake sewungangeza ngeminye imizuliswano. “Empeleni uma uyenza kabili, usuke sewuyenzele isonto lonke ngoba umuzwa (omnandi) usuke uzohlala isikhathi eside. Okuba-lulekile wukuthi ningenzi senga-thi nigcina icala, yingakho ngincoma ukuthi kuvukwe ngesikhathi esinganeno ekuseni ukuze ne-nzisise,” kuphetha uDkt Zwane.
Previous articleILANGA CHRISTMAS SMART PHONE PROMOTION
Next articleLuyimpilo ucansi lwasekuseni